काेराेनाकाे दोस्रो डोजको खोप वैशाख ७ देखि ११ गतेसम्म लगाइने
चैत्र १७, २०७७ मंगलवार
काठमाडौं, चैत १७ गते । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा परेकाहरुको दोस्रो डोजको खोप आगामी वैशाख ७ देखि ११ गतेसम्म लगाउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख प्राध्यापक डा. जागेश्वर गौतमले पहिलो प्राथमिकतामा परेकाहरुको दोस्रो डोजको खोप लगाउने समय निर्धारण भएको बताउनुभयो ।
दोस्रो चरणको महामारी जोखिम
छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको जोखिम बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिएको छ । तर डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. गौतमले बताउनुभयो । पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा भारतमा सङ्क्रमण दर बढेको एक दुई हप्तापछि नेपालमा पनि संक्रमण दर बढ्न सक्ने भन्दै तयारीमा जुट्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ । दैनिक २ देखि ३ हजारको संख्यामा भारतीय नागरिकहरु नेपाल फर्कदा भारतबाट कोरोना संक्रमण पनि नेपाल भित्रिने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
नाकामा एन्टिजेन्ट जाँच
भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढेपछि सीमा नाकामा पनि स्वास्थ्य तथा सुरक्षा चेकजाँच बढाइएको छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा चेकजाँच गरेकोमा हालसम्म ४८ जनाभन्दा बढीमा दोस्रो चरणका कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
सीमा नाकाहरुमा एन्टिजेन्ट स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार आधा घण्टासम्ममा कोरोना संक्रमणको परिणाम जान्न सकिन्छ । केही नाकाहरुमा भने यो एन्टिजेन्टको व्यवस्था हुनसकेको छैन । त्यसका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताएको छ ।
नेपालमा ५ दशमलव ६ प्रतिशतले खोप लगाए
देशको कुल जनसंख्यामध्ये ५ दशमलव ६ प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । अझै पनि ९० देशमा यो खोप लगाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो पहल ‘वन अफ द बेस्ट पहल’ को रुपमा लिइएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो । विश्वमा झण्डै ५ अर्ब खोप आवश्यक रहेकोमा १ अर्ब पनि खोप उत्पादन हुनसकेको छैन । जसकारण पनि खोप अभाव भएको हो ।
दुई हजारसम्म सक्रिय संक्रमित
देशमा अहिले पनि ११ सयदेखि १२ सयसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या छ । हालसम्म २ लाख ७६ हजार संक्रमित र ३ हजारको संख्यामा संक्रमितको मृत्यु भएको अवस्था छ । यो मृत्युदर अन्य देशको तुलनामा कम हो ।
मृत्युदर कम गर्न सरकारले सकेसम्म गरेको पहललाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. गौतमले बताउनुभयो । आगामी वैशाख ७ देखि ११ गतेसम्म लगाइने दोस्रो डोजको खोपमा स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले अरुलाई पनि सार्न सक्ने सम्भावना बढी भएको, संक्रमितको उपचारका लागि अनिवार्यरुपमा आवश्यक रहेको र आफ्नो जीवन नै उच्च जोखिममा राखेर फ्रन्ट लाइनमा कोरोनिाविरुद्ध लड्ने हुनाले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको भनाइ छ ।